ဘာဘရာဒီဟတ်၏ခန့်အပ်မှုဖြင့် Grass Valley သည် GV Media Universe ကိုတိုးချဲ့ရန်အရှိန်မြှင့်ခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2021 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
Telestream အသစ်တီထွင်မှုကို PRISM Waveform Monitors ၏မျိုးဆက်သစ်အတွက်စစ်ဆေးခြင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Grass Valley သည် Barbara DeHart ကိုခန့်အပ်ခြင်းဖြင့် GV Media Universe ကိုတိုးချဲ့သည်
Grass Valley သည် Barbara DeHart ကိုခန့်အပ်ခြင်းဖြင့် GV Media Universe ကိုတိုးချဲ့သည်
Montreal - 6ပြီလ ၇ ရက်၊ ၂၀၂၀ - မြက်ချိုင့် မီဒီယာနည်းပညာကျွမ်းကျင်သူ Barbara DeHart ကို GV Media Universe အတွက်မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုဒါရိုက်တာအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းကို cloud-first, software အခြေခံအနာဂတ်သို့ကူးပြောင်းမှုကိုဆက်လက် ဦး ဆောင်နေသည်။ ဤအသစ်စက်စက်သောအခန်းကဏ္Deတွင် DeHart သည် Grass Valley ၏မဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ပူးပေါင်းမှုများအားလုံးကိုအသိအမှတ်ပြုထုတ်လွှင့်သည့်နည်းပညာရောင်းချသူများ၏မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်နိုင်သည့်ဖြေရှင်းမှုများကိုအတူတကွ cloud-native ဂေဟစနစ်သို့ပေါင်းစည်းရန်အာရုံစိုက်လိမ့်မည်။
GV Media Universe သည်စစ်ဆင်ရေးအသစ်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏လုံခြုံသော၊ အကျိုးရှိရှိ၊ သက်သေပြထားသောဂေဟစနစ်တွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာဖန်တီးခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်း၏ software နှင့် cloud အခြေခံအနာဂတ်သို့ကူးပြောင်းခြင်းအတွက် Grass Valley ၏ရှေ့ပြေးအမြင်ဖြစ်သည်။ GV Media Universe မှမဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်များအနေဖြင့်ပိုမိုမြန်ဆန်သောမိုcloud်းတိမ်လမ်းကြောင်းနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်စီးပွားဖြစ်ဂေဟစနစ်ကို၎င်းတို့၏လက်လှမ်းမီနိုင်မှုနှင့်ရောင်းအားအလားအလာတိုးချဲ့သည်။ Grass Valley ဖောက်သည်များအနေဖြင့်ဤမိတ်ဖက်များမှအကျိုးကျေးဇူးများကိုချောမွေ့စွာပေါင်းစည်းနိုင်သောထုတ်လုပ်မှုပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်စက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်သည့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ သုံးစွဲသူများသည် system configuration နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းထက်အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုအပေါ်အာရုံစိုက်နိုင်သည်။
ယခင်အဖွဲ့ဝင်တ ဦး အနေဖြင့် cloud computing ၏သူမ၏အသိပညာအပေါ်ဆွဲ Telestream အမှုဆောင်ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့နှင့်မတူကွဲပြားသောကုမ္ပဏီများနှင့်ထုတ်ကုန်များပေါင်းစပ်ထားသည့်သူမ၏အတွေ့အကြုံများ၊ DeHart သည် Grass Valley ၏အဆင့်မြင့်နည်းပညာဒုတိယဥက္ကpresident္ဌ Mike Cronk ကိုအစီရင်ခံမည်။ သူကထောက်ပံ့သောချိတ်ဆက်ထားသောဖြေရှင်းချက်များ၏ပြည့်စုံသောဂေဟစနစ်ကိုဖန်တီးရန်တာ ၀ န်ယူလိမ့်မည် GV AMPP (Agile Media Processing Platform)၊ Cloud-Agnostic SaaS ပလက်ဖောင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်အမျိုးမျိုးသောကွဲပြားခြားနားသောပလက်ဖောင်းများနှင့်စက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်အစီအစဉ်များကိုပို့ဆောင်ရန်ဖိအားပေးမှုများကိုရင်ဆိုင်နေရသည်။ Cloud ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းများဖြင့်ဖြန့်ကျက်ထားခြင်းဖြင့်၎င်းတို့သည်ဤမြင့်တက်သောအချက်အလက်များကိုကိုင်တွယ်ရန်နှင့်အကြောင်းအရာများကိုဆန်းသစ်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောနည်းလမ်းများဖြင့်ဖန်တီးနိုင်စေသည်” ဟု Grass Valley ၏စီအီးအိုနှင့်ဥက္ကဌ Tim Shoulders ကမှတ်ချက်ချသည်။ GV Media Universe နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များအနေဖြင့်၎င်းတို့၏ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များအတွက် end-to-end cloud ဂေဟစနစ်ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးမည့်ဖြေရှင်းချက်ပေးသူများကိုပေါင်းစည်းပေးနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကသူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကို cloud သို့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။ ဘာဘရာသို့သင်္ဘောပေါ်သို့တင်ခြင်းအားဖြင့် GV Media Universe ကိုပုံဖော်ရန်သူမ၏ဗဟုသုတနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုအသုံးချပြီးနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကို Cloud-native ကမ္ဘာသို့သွားရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ”
DeHart သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ထုတ်ကုန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များ၊ desktop ဆော့ဝဲလ်နှင့် cloud စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဦး ဆောင်နေသည် Telestream။ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ခိုင်မာသည့်မဟာဗျူဟာအမြင်ဖြင့်သူသည်ကုမ္ပဏီများ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့်လူများ၏နောက်ဆက်တွဲပေါင်းစည်းခြင်းများကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက DeHart သည်လေ့လာမှုတိုးတက်စေရန်၊ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် STEM ပညာရေးဇွဲကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်စမတ် VR သင်ကြားမှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်စွဲမြဲနေသောနည်းပညာများ၊ သူမသည်အမျိုးသမီးများ ဦး ဆောင်သောနည်းပညာကုမ္ပဏီများအားလမ်းညွှန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီးနောက်မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်များ၏ခေါင်းဆောင်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကတိကဝတ်ပြုသည်။
Grass Valley Media ၏စကြဝforာနှင့်မဟာမိတ်ဖွဲ့မှုဒါရိုက်တာဘာဘရာဒီဟာ့တ်က“ မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုကိုမိုsix်းတိမ်အဖြစ်ပြောင်းလဲတာ ၆ နှစ်ရှိပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်၊ ​​live ထုတ်လုပ်မှုကတန်ဖိုးအရှိဆုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ အခက်ခဲဆုံး - ကြောင်းကွင်းဆက်၏အစိတ်အပိုင်းများ။ Grass Valley သည်ဤဒေသတွင်ထူးချွန်ပြီးတိမ်တိုက်မွေးစားခြင်းဆီသို့စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးရွှေ့ပြောင်းရာတွင် ဦး ဆောင်နေသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေအတွက် cloud ရဲ့စွမ်းအားကိုဖွင့်ပေးတဲ့အဖွဲ့ ၀ င်ဖြစ်ရတာစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။
GV Media Universe ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက်နောက်ထပ်အချက်အလက်များရရှိနိုင်ပါသည် ဒီမှာ.
မြက်ချိုင့်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်းကိုသိရှိလိုပါက, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး grassvalley.com.
GrassValleyLive မှာစကားလက်ဆုံ join:
Grass Valley ၏အဆုံးမှအဆုံးသို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောပွင့်လင်းသောစံနှုန်းများကိုအခြေခံသည့်ဖြေရှင်းနည်းများသည်အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများ၊ ထုတ်လွှင့်သူများနှင့်မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများအားတောက်ပသောအကြောင်းအရာများကိုထုတ်လုပ်ရန်နှင့်အောင်မြင်သောမီဒီယာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတည်ဆောက်ရန်ကူညီသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွင်အကြီးမားဆုံးနှင့်ဖန်တီးမှုအရှိဆုံးအမည်များအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ပြီးကြည့်ရှုသူအားလှုပ်ရှားမှုနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စေမည့်အရည်အသွေးမြင့်အရည်အသွေးပါ ၀ င်သည့်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်းကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ သူတို့ကိုပုံပြင်နှင့်ဆက်သွယ်ပြီးတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဆက်သွယ်သည်။
Montreal တွင်အခြေစိုက်ပြီး Grass Valley သည်မီဒီယာနည်းပညာလုပ်ငန်းတွင်နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ပါဝင်ခဲ့ပြီး Black Dragon Capital မှပိုင်ဆိုင်သည်။
မူပိုင်ခွင့်© 2021 မြက်ချိုင့်ကနေဒါ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ အသိပေးစာမပါဘဲပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်၏ Specifications ။
မီဒီယာ / စက်မှု Analyst, ဆက်ဆံရေး:
Elaine Tipping [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] + 1 530-265-1183
ဗက် Clark က [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] + 44 (0) 20 3219 5836
Bitcentral လောင်စာဆီပရိသတ်များရောက်ရှိခြင်းနှင့် NewsON တွင် Cowles အသံလွှင့်ခြင်းအတွက်ငွေကြေးအသစ်များရရှိရန်အခွင့်အလမ်းများ - ဧပြီလ 19, 2021
Turbo ကိုတီထွင်ရန်နောက်ဆုံး NetRange တိုးတက်မှုများသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်လျှော့ချထားသော CAPEX & OPEX နှင့်ကြော်ငြာခြင်းအခွင့်အလမ်းအသစ်များမှတစ်ဆင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်စမတ်တီဗီဈေးကွက်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ - ဧပြီလ 19, 2021
Unified Streaming သည် Unified Remix VOD2Live ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ၎င်းသည် OTT ပံ့ပိုးပေးသူများအား VOD စာကြည့်တိုက်များမှတိုက်ရိုက်ချန်နယ်များဖန်တီးနိုင်သည်။ - ဧပြီလ 19, 2021
ခန့်အပ် ဘာဘရာ dehart မြက်ချိုင့် 2021-04-06
ယခင်: ဆုရရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူ Josh Ausley သည်ကူးစက်မှုကာလအတွင်းတစ်နှစ်တာထုတ်လုပ်မှုကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုသည်
နောက်တစ်ခု: တရုတ်ဗီဒီယိုဝေမျှခြင်းအက်ပလီကေးရှင်း Douyin သည်“ လူကြိုက်အများဆုံး” Intercom Solution ကို Clear-Com ပြုလုပ်သည်